China Plastic ụlọ ngwa Manufacturer na Supplier | Meste
Ngwa ụlọ plastik bụ aha izugbe nke ihe eji eme ụlọ nke ejiri plastik mee dị ka isi akụrụngwa.
Ngwa ụlọ plastik nwere njikọ chiri anya na ndụ anyị. N’ime ụlọ gị, ị nwere ike ịhụ ngwaahịa plastik ebe niile: bekee rọba, bọket rọba, oche rọba, oche, efere, brushes, combs, ladders, box storage, wdg.E nwere ụdị ụlọ plastik anọ: ihe ndị dị ọcha, arịa, arịa. , na-anọdụ ala. Imirikiti n'ime ha na-eme site na ịkpụzi ọgwụ.
Onyinye igbe, friji drawer, nchekwa igbe, plastic basin, plastic ịwụ, nkata, plastic ketulu
A na-eji arịa plastik ụlọ eme ihe maka ogologo oge na nchekwa oge niile. Ha nwere nnukwu olu dị n'ime ma dị mfe nchịkọta. Achọrọ iji guzogide ụfọdụ ịdị arọ na nkwụsi ike.
Ihe n'ozuzu ya bụ 300-500 mm n'ogologo na obosara, na ihe a na-abụkarị PP ma ọ bụ PS.
2.Plastic tableware & efere
Nri, efere, igbe nri, igbe swiiti rọba, efere mkpụrụ osisi, iko mmiri, mma Plastic, ndụdụ, ngaji
Efere, iko plastik
Food igbe, plastic swiiti igbe, mkpụrụ efere, mmiri cup, Plastic mma, ndụdụ, ngaji ......
Ihe e ji mara ụdị arịa a na -echekwa ma ọ bụ metụ nri, swiiti, mkpụrụ osisi, mmiri ọ andụ andụ na ihe ndị ọzọ aka, nke na-emetụta ahụike ndị mmadụ.
Ihe plastik niile nwere njirimara nke ịhapụ ihe ndị na-emerụ ahụ n'okpuru ọnọdụ nke kpo oku ma ọ bụ kọntaktị ogologo oge na acid, alkali ma ọ bụ mmiri. A na-etinye arịa plastik ndị a ozugbo ma ọ bụ na-akpakọrịta na ihe ndị dị n'ọnụ ụzọ, ọkachasị iko plastik nwere achịcha, igbe nri ehihie kpụ ọkụ n'ọnụ ma ọ bụ efere plastik, mma plastik na ndụdụ, ngaji na ofe na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ihe ọ drinksụ drinksụ ruo ogologo oge. Ihe plastik kwesịrị irube isi na nri na ụkpụrụ ahụike.
Ya mere, ọ dị mkpa ịhọrọ ihe plastik nwere arụmọrụ kwụsiri ike n'ụzọ ziri ezi dịka ọnọdụ eji eme ihe, ma attentionaa ntị na usoro eji eme ihe, zere iji oge dị ogologo, ma dị ọcha n'oge.
3. Ngwaọrụ nkeonwe:
Gụnyere nsí ezé, mbo, ntutu isi, etiti iko, iko plastik.
Isiokwu ndị a bụ ngwongwo nke ndị ọzọ, ndị ọzọ enweghị ike iji ya hụ na ịdị ọcha onwe onye na ahụike.
Ihe ndị a na-abụkarị maka iji onwe gị iji hụ na ịdị ọcha, dịka ncha ezé, combs, iko mmiri, ma ọ bụ buru gị, dị ka iko, akwa ntutu. Maka ịkpọtụrụ mmadụ kpọmkwem, ọ dị mkpa ịmepụta ụdị dị mma ma jiri plastik na-adịghị emerụ ahụ, dị ka acrylic, PP, melamine na na. Ọdịdị na-achọkwa mma, ihe ọhụrụ na mmadụ iche iche.
4.Hoousehold kwa ụbọchị ngwa plastik
Gụnyere hangers, brushes, ladders, oche, ladles, plastic basins, funnels, water can, floure ite na wdg. Ihe ndị a bụ ngwaọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị nke ezinụlọ.
Kinddị ngwa a bụ ngwa ụlọ eji eme ihe, ọkachasị na-elekwasị anya na ọrụ ndị bara uru, mara mma ma na-adịgide adịgide. Enwere ihe n'ozuzu maka ihe plastik eji, dị ka nnabata ROHS.
5. Ngwa ọgwụ na ngwa ọcha
gụnyere igbe ọgwụ, sirinji, igbe ncha, mkpofu ahịhịa, Igbe anụ ahụ, brooms, brushes, ntụ ntụ, wdg.
Ezinaụlọ na-eji ha eme ka ha dị ọcha ma dịkwa ọcha. Na akụrụngwa na ngwa dị mkpa maka igbochi na ọgwụgwọ mberede nke mmerụ na ọrịa.
Idebe gburugburu ebe dị ọcha ma dị ọcha bụ mmesi obi ike maka ndị mmadụ iji belata ọrịa ma bie ndụ dị mma. Nhicha kwa ụbọchị gụnyere ngwa ọrụ dịka broomsticks, ahịhịa mkpofu ahịhịa, ncha na brushes brushes.
Igbe ọgwụ na sirinji nwere ohere ole na ole iji mee ihe n'oge nkịtị, mana ha bụ ngwa dị mkpa. Karịsịa mgbe enwere ọtụtụ ndị ezinaụlọ, gụnyere ụmụaka, yana mgbe ha nọ ụlọ ọgwụ, ọ dị mkpa ịchekwa oge ha site na ọgwụgwọ ahụike, nke na-echekwa oge na ego dị ukwuu, ọbụnakwa na-azọpụta ndụ.
Nchịkọta nke njirimara nke ngwaahịa Plastic
Ezinụlọ nke ngwaahịa plastik ezinụlọ bụ nnukwu ụdị ngwaahịa plastik. Ha na-egbu maramara ma dị iche iche, nwere ihe dị iche iche a chọrọ. Usoro ha na ọdịdị dị iche iche na-ekpuchi site na ịkpụzi nkedo nkịtị, ịkpụzi ngwaahịa na nnukwu gloss, ịkpụzi agba agba abụọ, ịmị ọkụ na-ekpo ọkụ, nnyefe ntinye mmiri, electroplating na na. Ihe ha nwekọrọ:
1. Nchekwa chọrọ: Ikwesiri mgbe niile na ahụ mmadụ ma ọ bụ nri, iji plastic nwere ọkwa dị iche iche nke nchekwa na-adịghị emerụ ahụ;
2. Ihe nkasi obi chọrọ: ihe mmado mpempe akwụkwọ ahụ kwekọrọ na omume ndị mmadụ;
3. Ihe achọrọ anya nke ọdịdị: ọdịdị kwesịrị ịdị mfe ịchọpụta, mara mma ma dị mma, ma ọ bụ ụcha dị ndụ na eke.
4. Quality chọrọ: N'ihi na containers na ezinụlọ na-adị irè na inogide, n'ihi na swiiti efere, mkpụrụ efere, iko osisi na-enwu gbaa elu
Nkedo technology nke ezinụlọ plastic ngwaahịa ezinụlọ plastic ngwaahịa na-emekarị nwere oké ahịa ina. N'otu oge ahụ, ịkpụzi ebu bụ ihe dị oke ọnụ. A ghaghị ịkekọrịta nnukwu iwu iji kesaa ọnụahịa nke nrụpụta ebu. N'ihi ya, ọtụtụ n'ime ha na-adabere n'ịkpụzi ọgwụ maka imepụta oke. Akpụzi ọgwụ nwere uru nke arụmọrụ dị elu, nke dị mma maka mmepụta nnukwu ụlọ ọrụ. A na-ejikarị anụ ụlọ, HIPE na eyi eme ihe n'ụlọ ngwaahịa plastik. PVC, LDPE, PS, melamine bụ plastik thermoplastic na-adịghị emerụ ahụ. Maka ihe ndị na-adịghị ize ndụ, ụfọdụ na-eji ihe PMMA, PC na ABS iji nweta arụmọrụ achọrọ. Ngwaahịa ndị dị n'ụlọ na-achọkarị ire ụtọ, na-enwu gbaa agba, na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ịmịcha mmiri, ịnyefe mmiri na usoro ndị ọzọ iji chọọ mma ma chebe elu ahụ, ma nwekwuo ahụmịhe onye ọrụ. Yabụ, Na ihe a chọrọ kwa ụbọchị, iji mezuo ọchịchọ ndị na-arịwanye elu nke ndị ahịa anyị, anyị etinyela onwe anyị n'ịmepụta usoro zuru ezu nke Ngwaọrụ Plastic. Emere ihe ndị a site na iji akara ugo mmụta kachasị mma ma jiri nwayọ gwụ. Anyị na-ahazi usoro anyị dị ka nkọwa ndị ahịa anyị nyere. Iji izute na-eto eto mkpa nke ahịa, anyị na-kwara na-amị a dịgasị iche iche nke ezinụlọ plastic ngwaahịa. Ọ bụrụ na ị nwere arịrịọ ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị. Anyị ji obi anyị niile enye ndị ahịa ọmarịcha ngwaahịa na ọrụ dị elu ga-emezu ihe ị chọrọ. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ ma ọ bụ nkwupụta.
Nke gara aga: Plastic igbapu grate mkpuchi
Osote: Stackable plastic nchekwa igbe injection ịkpụzi
Mbugharị mbufe mmiri maka ngwaahịa plastik
Plastic mposi oche ebu
Plastic injection igwe